Dhimasho iyo Dhaawac Ka Dhashay Weerar ismiidaamin Ah Oo Ka Dhacay Magaalada idlib Ee Wadanka Suuriya.
Monday July 24, 2017 - 10:58:08 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalo dhacda waqooyiga Suuriya oo ay maamulaan xoogaga Mucaaradka ah.
Wararka ka imaanaya Suuriya ayaa sheegaya in ugu yaraan 17 qof oo isugu jira dad shacab ah iyo dagaalyahanno ay ku dhinteen qaraxyo is xigxigay oo ka dhacay bartamaha magaalada idlib ee waqooyiga Suuriya.
Ruux ismiidaamiyay oo kaxaynayay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay ayaa isku qarxiyay isku imaatin ay ku sugnaayeen dagaalyahanno katirsan Jamaacada Jihaadiga Taxriiru Shaam waxaana qaraxa ka dhashay khasaara lixaad leh .
Goob Joogayaal ayaa sheegay in dhimashadu ay ka badan tahay 17 ruux oo u badan dagaalyahanadii la beegsaday, guddiga difaaca madaniga magaalada idlib ayaa war uu soo saaray ku xaqiijiyay in tobanaan qof shacab ah ay si xun ugu dhaawacmeen qaraxa oo ka dhacay goob suuq ah oo dadku ku badanyihiin.
Warar kale ayaa sheegayay in qaraxyadu ay gaarayeen illaa iyo sedax qarax balse qaraxa khasaaraha ugu badan geystay ayaa ka dhacay halka loo yaqaan Dawaaru Zaraacah.
War rasmi ah oo kasoo baxay Jamaacada Taxriiru shaam ayay ku sheegtay in dad shacab ah iyo dagaalyahano lagu dilay weerarka, sawirro lagu faafiyay baraha Internetka ayaa muujinayay burbur xooggan oo ka dhashay qaraxa.
illaa iyo hadda majirto cid sheegatay qaraxan khasaaraha badan dhaliyay balse waxaa lagu eedeeyay in uu Mas’uul ka yahay Ururka Dowladda islaamiga ah oo dagaal dhan walba ah ku iclaamiyay inta badan jamaacaadka islaamiga ah ee ka dagaallamaya waqooyiga Wadanka Suuriya.